November 19, 2020 - Online Hartha
ကောငျလေး နဲ့ အိမျဖျော( မသင်ျကာလို့ စီစီတီဗီ တပျကွညျ့ လိုကျတဲ့အခါ…)
November 19, 2020 by Online Hartha
ကောင်လေး နဲ့ မဖွယ်မရာ လုပ်နေတဲ့ အိမ်ဖော်( မသင်္ကာလို့ စီစီတီဗီ တပ်ကြည့် လိုက်တဲ့အခါ လေဖြတ်နေ တဲ့ အသက် (၇၀) ကျော် အမေကြီး ကို ဘေးမှာ ထားပီး ကောင်လေး နဲ့ မဖွယ်မရာ လုပ်နေတဲ့ အိမ်ဖော်( မသင်္ကာလို့ စီစီတီဗီ တပ်ကြည့် လိုက်တဲ့အခါ မှသိရ) ကျမ ဒီပို့စ် ကို ကျမလို အိမ် အကူ မရှိမဖြစ် ခေါ်ထား ရသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက် ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် …။ အိမ်မှာ ကျမနဲ့ အသက် ၇၀ ကျော် လေဖြတ်နေတဲ့ အမေ ၂ ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် …။ ကျမက (-)ရုံးက … Read more
ဗိုကျခပျြ ဖြျောရညျ ပွုလုပျနညျး
ဗိုက်ချပ်ဖျော်ရည် ပြုလုပ်နည်း … ပျား ရည် သံပုရာ ဖော်မြူလာက ၀မ်းဗိုက်သား ကို လျှော့ ချပေးရာမှာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ပါဝင် ပစ္စည်းများ… သံပုရာသီး (၁၅) လုံး ပျားရည်… ဆား အနည်းငယ် ပြုလုပ်နည်း… သံပုရာသီး အခွံကို ဆားနှင့်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ (၅) မိနစ်လောက်ကြာလျှင် ရေနှင့် ဆေးကြောပေးပြီး ရေခြောက်အောင်ထားပါ။ သံပုရာသီးများကို အကွင်းလေးများဖြစ်အောင် ပါးပါးလှီး ပြီး အစေ့ များဖယ်ပစ်ပါ။ ကရားထဲသို့သံပုရာသီး အကွင်းလေး (၁) ကွင်းလျှင် ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း အချိုးကျ ထည့်ပြီးရေမြုပ်အောင်ထည့် ပါ။ အဖုံး ဖုံးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး… … Read more
အသဈပွငျလိုကျတဲ့ စညျးမဉျြး အသဈတှနေဲ့ ကွညျ့ကောငျးတော့မယျ့ အုပျကွီး ရှေးခယျြပှဲ အကွောငျးမြား
အသစ်ပြင်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်း အသစ်တွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတော့မယ့် ရပ်ကွက်အုပ်ကြီး ရွေးချယ်ပွဲများ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေ အသစ်ပြန်ရွေးကြတော့မယ်… သည်တခါတော့ ကိုယ်တိုင်မဲပေးကြပါ။ အရွေးမမှားကြပါနဲ့ ပြည်သူ့အ‌တွက် စေတနာနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်သူတွေကို ဘဲရွေးကြပါ) အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရင်ဥပဒေနဲ့ ခုဥပဒေ ပြင်ဆင်ပြီး ကွာခြားချက်လေးကိုပြောပါမယ်။ (၁) ဆယ်အိမ်မှုးကို “တစ်အိမ်တစ်မဲ”စနစ်နဲ့ အရင်ရွေးရပါမယ်။ (၂) အဲဒီဆယ်အိမ်မှုးထဲက ရာအိမ်မှူးကို “တစ်အိမ်တစ်မဲ” နဲ့ ထပ်ရွေးရပါမယ်။ (၃) ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး ထက်ပိုရင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အတွင်းမှာရှိတဲ့ “တစ်အိမ်တစ်မဲ”နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေး ကြရပါမယ်။ (အဓိကက မဲပေးရမယ့်အချိန်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့) (Nyi Nyi Aung) အဲဒါအရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးရာမှာ အဓိကကျတဲ့ ဒီအချက်ကို လွှတ်တော် သက်တမ်းမှာ … Read more
ခြေမ ထက် ခြေညှိး ရှည်တဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ( လက် မလွှတ်သင့်တဲ့ သူများအကြောင်း )
ခြေမထက် ခြေညှိးရှည်တဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ( လက်မလွှတ်သင့်တဲ့သူ ) ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ … ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ၄။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ ၅။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ ၆။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။ ၇။ သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။ … Read more
“ကံအညံ့တှကွေုံနလေား? လာဘျပှငျ့ခငျြလား? အမတျကွီးဦးပျေါဦး လကျထကျ က ယတွာကောငျး”
ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး အမည်ပေးသော စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ “အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်ကိန်း” ယတြာ လူတိုင်း အခက်အခဲကြုံလာသောအခါ..အညံ့နှင့်ကြုံသောအခါ…လာဘ်လာဘပိတ်ဆို့နေသောအခါများ တွင်..ဤ ယတြာကို ပြုလုပ်ပါက လက်တွေ့အကျိုးရှိပေသည်။ မည်သူမဆို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကျေးဇူးများစေသောနည်းဖြစ်၍ အခက်အခဲများ..အညံ့များ…လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ ပြေပျောက် ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗဟုသုတ ရစေရန်နှင့် အဆင်ပြေကြစေရန် ရည်သန်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးဖွားသူများ…. တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများသည် အင်္ဂါနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္ဂနွေ ထောင့်တွင် ကံကော်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ …. အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။ တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ…. တနလာင်္နေ့ မွေးသူများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္လာ ထောင့်တွင် ဇီး(၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ … Read more
ခြောငျးဆိုး ရငျကွပျ သလိပျကပျသူမြား ခကျြခငျြးသောကျ ခကျြခငျြး သကျသာ ပြောကျကငျးစမေညျ့ ဆေးစှမျးကောငျး တဈလကျ
ချောင်းဆိုးရင်ကြပ် သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးကောင်းတစ်လက် ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ် သလိပ်ကပ် သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်စေမည့် ဆေးနည်းတစ်ခု မိတ်ဆွေတို့ အတွက် တင်ပြပေးလိုက် ပါတယ် ၊ ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ် သလိပ်ကပ် ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးဆိုး ရင်ကြပ်ကြပ် ပဲပင်ပေါက် ရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ် ။ ညအိပ်ယာဝင် မနက် အိပ်ယာထ နှစ်ကြိမ် ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးစိမ်၍ သောက်ပါ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက် အဆင်ပြေစေမယ် ၊ လွယ်လွယ်လေးပါ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ပဲပင်ပေါက် ကို ခွက်တစ်လုံး ထဲထည့်ပြီး ရေနွေးထည့်သောက် ရုံပါပဲ …။ C rdUnicode Versioon … Read more
လူပြောများနေတဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေး (၅) ယောက်ဖြစ်ရပ်…
လူပြောများနေတဲ့ ကိုးတန်း ကျောင်းသူ မိန်းကလေး (၅) ယောက်ဖြစ်ရပ်… ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တစ်ယောက် စီ ကောင်လေး လေးငါးယောက် လောက် က တွဲပီး လမ်းလျောက်လာ ကြတာ တာတွေ.လိုက်တယ်… မိန်းကလေး တွေ ခြေလှမ်းက ယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး .. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က အစာ အဆိပ်သင့်တာပါလို. လွယ်လွယ် လှမ်းပြော ပီး သူတို. က ဆက်သွားကြပေမဲ့ စိတ်ထဲ စိတ်မချဖြစ်တာနဲ….. ကား ကို … Read more
အိမျတဈအိမျမှာ လာဘျလာဘ မပိတျရအောငျ ဒါတှကေိုရှောငျပါ…
အိမ် တစ်အိမ်မှာ လာဘ်လာဘ မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ… စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ – ရဟန်းသံဃာတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ကျောင်းပစ္စည်းများကို အိမ်သို့ ယူဆောင်အသုံးမပြုရပါ။ ဥပုဒ်နေ့တွင်ခေါင်းမလျှော်ရပါ။ ဘုရားညောင်ရေအိုး အရေအတွက်ကို စုံဂဏန်းမထားကောင်းပါ။ လင်ယောက်ျား၏ လက်ယာဘက်၌ ဇနီးသည်ကိုမအိပ်စေရပါ။ မိမိထက် အသက် ပညာ အရွယ် ဂုဏ်ကြီးမြင့်သူ၏အမြင့် တစ်နေရထက်၌ မထိုင်ရပါ။ ဝါတွင်း၌အိမ်ထောင်မပြုရပါ။ ဝါတွင်း၌ အိမ်မပြောင်းရသလို ခေါင်းအုံးလည်း မချုပ်ရပါ။ ဈေးဆိုင်၏ စားပွဲများ ကောင်းတာများ၌ လက်ထောက် မေးထောက်ခြင်းများမပြုရပါ။ ပြာသိုလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင် အိမ်မပြောင်းရပါ။ … Read more
တဈလမှာ (၂) ကွိမျသာ လုပျခှငျ့ရှိတဲ့ သောကကငျးစငျငှဝေငျ ငှပှေား အစီရငျယုံကွညျစှာ လုပျဆောငျပါက အကြိုးထူးမြားသညျ…
သောကကင်းစင်ငွေဝင်အစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည်… သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည်မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျားယခု ဆရာတင်ပေးမည့်အစီရင်လေးက မိမိရည်မှန်းစီမံထားသည့်အလုပ်ကိစ္စများလုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်နိုင် ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်နိုင် ဖြစ်နေတာတွေကတစ်မျိုးလုပ်ချင်နေတာတွေက တစ်မျိုးအလွဲ့လွဲ့အချော်ချော်ဖြစ်နေကြသည့်ကာလအတောအတွင်းမှာ စိတ်ရှုပ် စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေခြင်းငွေကြေးပူပင်သောကဖြစ်နေခြင်းဟူသမျှ ကာကွယ်ကင်းစင်စေဖို့ရန်နှင့် ငွေဝင်ငွေပွားစေမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအစီရင်လေးကိုဒါနပြုပါတယ်…။ ၇ရက်သားသမီး မည်သူမဆို လုပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျားပန်းကန်ပြားမှာ ပိုက်ဆံ ၁၁၀၀ကျပ်တင်ပါ… ပိုက်ဆံပေါ်မှာ သံပုရာသီးစစ်စစ်၂ လုံး နှင့် ရေဖြည့်ထားသော ဖန်ခွက်တင်ထားပါ… အိမ်ဘုရားမှာ တနင်္လာနေ့ တစ်ညထားပြီးလျှင် နောက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ နံက်( ၇ )နာရီမှ ( ၇ )နာရီခွဲအတွင်း သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၄စိပ်စိပ်ပြီး အိမ်ခြံ တိုက်ခန်း ထောင့် ၄ထောင့်မှာ တစ်စိပ်စီ ချထားပါ… ကျန်တစ်လုံးကို ၂စိပ်စိပ်ပြီး ဖန်ခွက်ရေထဲညှစ်ထည့်၍ အိမ်ခြံဝင်းပတ်ပတ်လည်မှာ ဖြန်းထားပေးပါ ပိုက်ဆံ … Read more